Yaa samaynaya Fasalka? Dabeecadda dabiiciga ah waxay bixisaa Kaarka Warbixinta ee Wabiyada Wabiyada ee Mississippi
Wixii ugu horreeyey abid, macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan 31-gobol ee Mississippi River Watershed, ama America's Watershed, ayaa la sameeyay, la falanqeeyay, lana miisaamay "Kaarka Warbixinta"Oo la sii daayay Oktoobar 14, 2015. Kaarka Warbixinta ayaa cabbiraya lix gool oo ballaaran - Biyaha; gaadiidka; xakamaynta daadka iyo yareynta khatarta; dhaqaalaha; madadaalo; iyo caafimaadka dabiiciga ah - dhammaantoodna muhiim u ah wabiyada caafimaadka leh iyo bulshooyinka caafimaadka qaba.
America's Watershed ayaa bixiya biyaha cabitaanka malaayiin qof, madadaalo, deegaanka duurjoogta ah, kaabayaasha dabiiciga ah si ay u nadiifiyaan biyaha iyo in la yareeyo khatarta fatahaada ee bulshooyinka, waxayna u adeegtaa matalaad dhaqaale oo Maraykan ah. Hase yeeshee wasakheynta, kaabayaasha dhaqdhaqaaqa dadka sameeya, munaasabadaha cimilada oo aad u xun, iwm.
Sanadkii 2011, dabeecadda dabiiciga ah iyo US Army Corp of Engineers ayaa aasaasay Barnaamijka Watershed Initiative ee Maraykanka (AWI) waxayna isku keeneen in ka badan 400 ganacsi, hay'ado dawladeed iyo sayniska si ay u raadsadaan xalalka caqabadaha haysta Webiga Mississippi.
Ilaa 2010, Machadka McKnight Foundation ayaa taageera Dabeecadda Dabeecadda dadaalka ah in lagu gaaro isuduwidda xudduudaha iyo isku xirka Wabiga Mississippi River si loo hagaajiyo tayada biyaha iyo adkeysiga. Sannadkii 2011, dabeecadda dabiiciga ah iyo Ciidanka Maraykanku waxa ay sameeyeen Maraykanka ee Watershed Initiative (AWI) oo isu keenay in ka badan 400 ganacsi, hay'ado dawladeed iyo sayniska si ay u raadiyaan xalalka caqabadaha wajahaya Wabiga Mississippi iyo 250 -da dheer ee wabiyada ee ku dhex jira, wada shaqeeyn aan horay loo arag ah oo ku salaysan cabbirka iyo baaxadda. AWI waxay ku dhiirigelisaa habdhaqan hufan, isku dhafan, iyo wadashaqeyn si loo maareeyo Aasaaska Watershed ee Maraykanka.
Laga bilaabo 2012, AWI waxay ku hawlanayd 700 oo daneeyayaal iyo khabiiro ka soo jeeda beelahaas oo dhan si ay u horumariyaan una soo saaraan Kaarka Warbixinta, kaas oo sidoo kale bixinaya qiimeyn shan shayadood oo waaweyn ah - Upper Mississippi, Lower Mississippi, Ohio, Tennessee, Arkansas, Red and Missouri rivers.
Iyadoo celceliska guud ee D + ee lixda yool ee ugu muhiimsan, Kaarka Warbixinta waxay muujinaysaa fursado badan kor u qaado darajada for America's Watershed. Waxay kormeeri kartaa horumarka lagu gaarayo ujeedooyinka iyo bixinta qorshe hawleed loogu talagalay tallaabooyin iskaashi. Sannadka soo socda, Natiijooyinka Kaarka Warbixinta waxaa lagu faahfaahin doonaa guud ahaan biyaha oo dhan waxaana loo isticmaalaa in ay sii wadaan codsi la wadaago si loo wanaajiyo mustaqbalka Wabiga Mississippi River Watershed.